ချစ်ကြည်အေး: Famous Southpaws
Famous Southpaws-အောင်မြင်ကျော်ကြား ဘယ်သန်သူများ...ပါတဲ့ရှင်...:P
Ref:The Sunday Times 22 Aug issue, Home, page-15
:P Sun Aug 22, 08:56:00 PM GMT+8
link ခေါင်းစဉ်လေး မြင်မြင်ချင်း ဘာလဲလို့... LOL :D
နွေဆူးလင်္ကာ Sun Aug 22, 09:00:00 PM GMT+8
မြင်လဲ မြင်တတ်တယ် .... ဆရာလူနေရဲ့ မျိုးလင်းထက် ဆိုးနေပြီ ...
သက်ဝေ Sun Aug 22, 09:08:00 PM GMT+8
Yayyy... Yayyy... William...
မသက် Sun Aug 22, 09:13:00 PM GMT+8
ပိုစ့် တိုတို လေးနဲ့ရယ်လဲရယ်ရ.. ဗဟုသုတလဲ ရတယ်.. ကျေးဇူးအစ်မ
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) Sun Aug 22, 09:24:00 PM GMT+8
ဟာ ဟ။ ဂလိုကိုးးးး))))
Maung Myo Sun Aug 22, 09:43:00 PM GMT+8
နာမည်ကြီး သောက်ပေါ များ ပေါ့
ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်ကြည့်သွားတယ် မြန်မာလို ။
ဇွန်မိုးစက် Sun Aug 22, 09:59:00 PM GMT+8
Like လုပ်လိုက်တယ်။ သဘောကျလို့။ :))
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂နှစ်လောက်က ဘာသာရပ်စာမေးပွဲတစ်ခုမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဘယ်သန်များအကြောင်းကို ထည့်ရေးဖူးတာ သွားသတိရတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက left handed people လို့ပဲ သုံးပြီး ထည့်ရေးလိုက်တာ။
“Southpaws” ဆိုတဲ့ အခေါ်ဝေါ်လေးပါ မှတ်သားရလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မချစ်ရေ။
Anonymous Sun Aug 22, 10:32:00 PM GMT+8
အမယ် southpaws ထဲမှာ ဘီလ်ဂိတ် ကြီးရော ပါနေပါလား
Anonymous Sun Aug 22, 10:43:00 PM GMT+8
ဒီ အိမ်ရှင် ရော Southpaw ကြီးများလား...
ဆွေလေးမွန် Sun Aug 22, 10:45:00 PM GMT+8
ဘယ်လိုပြောပြော မြန်မာအသံနဲ့ပဲ ဖတ်မိတယ် ..
TURN-ON-IDEAS Sun Aug 22, 10:47:00 PM GMT+8
ညာသန်ဆို ငါလဲပါမယ်ထင်တာပဲ (ဟမ်) :P
Anonymous Sun Aug 22, 10:54:00 PM GMT+8
ဟိဟိ မသိသေးတာမှတ်သားသွားတယ် အမချစ်ကြည် အာာဘွားးး မွ မွ မွ
Anonymous Sun Aug 22, 11:15:00 PM GMT+8
မြန်မာအသံထွက်နဲ့ပဲတည့်တည့်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတာ သိလို့ ကိုယ့်ကို ဓါတ်ပုံထဲမထည့်နဲ့လို့ပြောထားတာလေ....:P :P :P
pandora Sun Aug 22, 11:46:00 PM GMT+8
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Mon Aug 23, 12:51:00 AM GMT+8
တော်သေး အစ်မရယ် ညီမက ဘယ်သန်မဟုတ်လို့.. မဟုတ်ရင်တော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ ခံလိုက်ရဦးမယ်..
တိုတိုနဲ့ ထိတဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုရမယ်.. အသံထွက်အောင် အော်ရယ်လိုက်မိတယ်.. :)
မြစ်ကျိုးအင်း Mon Aug 23, 01:12:00 AM GMT+8
ဖတ်ကြည့်ပြီးမှ မပြုံးဘဲ ၀ါလုံးကွဲ ရယ်မိတယ် အစ်မရေ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Mon Aug 23, 04:12:00 AM GMT+8
အဲဒီ ဖင်မဲစောက်ပေါ ထဲတော့ မပါလောက်ပါဘူးနော်..
မောင်မောင် Mon Aug 23, 07:22:00 AM GMT+8
အင်း ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့် လိုက်တော့ မချစ်ကြည်အေး ပြောသလို
မြန်မာဘာသာ ကို အသံထွက်လိုက်မိပါတယ်။ :D
ဘာတဲ့ကျော်ကြားသော.............................
ချစ်ကြည်အေး Mon Aug 23, 10:52:00 AM GMT+8
ပျော်စရာ ကော်မန့်တွေ ပေးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ မောင်နှမများ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးပါ....
Green Fingers ရေ...အိမ်ရှင်က လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် Northpaw-ညာသန်ကွဲ့...။ အောင်မြင်ကျော်ကြား ညာသန်သူများ အကြောင်း ပြုစုတဲ့အခါ စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွယ်....:)
Cameron Mon Aug 23, 11:15:00 AM GMT+8
း) ဘာအသံမှထွက်မသွားဘူးနော် အမ
An Asian Tour Operator Mon Aug 23, 11:53:00 AM GMT+8
ကျနော် ကတော့ Southpaw မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။
Vista Mon Aug 23, 12:40:00 PM GMT+8
Thant Mon Aug 23, 01:42:00 PM GMT+8
အသံမထွက်ရဲလို့ ကြိတ်ရယ်လိုက်ရတာ....ခွိ ခွိ......
Anonymous Mon Aug 23, 04:29:00 PM GMT+8
ဓါတ်ပုံကို Southpaw ဆိုတဲ့ မြန်မာအသံအထွက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပြီး ဖတ်လိုက်တော့ တော်တော်လေးကို ရယ်စရာကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀မှာ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်သန်များကတော့ ထင်ရှားအောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများ အနုပညာရှင်များ နဲ့စီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အတုယူစရာ အားကျစရာ ဂုဏ်ယူစရာလို့ထင်မိပါတယ်
Finland ဆိုတဲ့နိုင်ငံကို မြန်မာအသံအထွက်နဲ. စဉ်းစားမိပြီး ပြုံးမိသလိုဖြစ်နေပါတယ်
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ....
Anonymous Mon Aug 23, 04:37:00 PM GMT+8
ဂုဏ်ယူစရာဆိုတာ သက်ဆုိုင်သူ ရဲ့ မိသားစုအသိုင်းအ၀န်းကို ဆိုလိုပါတယ်
Anonymous Mon Aug 23, 05:44:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်ရေး ရေ ...
စာလုံးပေါင်းမှားတာမဟုတ်ပါ အေး အစား ရေး လို.ပေါင်းကြည့်တာပါ
အသံထွက်ဆင်တူတဲ့ ဘလောဂါကြီးကို နှိပ်ကွပ်တာတော့ မဟုတ်ဖူးထင်ပါတယ်
ညိမ်းနိုင် Mon Aug 23, 06:41:00 PM GMT+8
ရင်နာလိုက်တာ အစ်မရယ်....ကျွန်တော်က ဘယ်သန်ဗျ...။ခုတော့ အလိုလိုနေ
ရင်း...southpaw ကြီးဖြစ်ရတယ်...။ဘယ်ငတိကများဒီစကားလုံးကို ထွင်လိုက်
ပါလိမ့်....ဟင်း....တင်းသဗျာ...။left handed ဆိုလည်း ရရဲ့သားနဲ့ဗျာ...။
ချိုကျ Mon Aug 23, 08:17:00 PM GMT+8
အစ်မချစ်..... ရယ်သွားတယ် အူလှိုက်သဲလှိုက် ဟီး
ဝက်ဝံလေး Mon Aug 23, 09:42:00 PM GMT+8
ဟုတ်ပါ့ မ မီးဆို ဘယ်လိုထွက်လိုက်လဲ သိလားေ-ာက်ပေါ တဲ့ ဟိဟိ
သုခုမလေဒီ Mon Aug 23, 11:14:00 PM GMT+8
ဟီးဟီး မြန်မာလိုအသံထွက်ကိုအရင်ဖတ်မိလိုက်တာပဲ. .တော်သေးတယ် စိတ်ထဲက အသံထွက်မို့ ...း)))
ဒါနဲ့ ကိုကြီးကျောက်ဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်သွားပါတယ်။ (ဖွားကိဆက်သွယ်လို့ရအောင်ပါ)
TZA Tue Aug 24, 07:41:00 AM GMT+8
ဟုတ်တယ်၊ iphone 4G လိုင်းကျကျသွားတဲ့ ပြဿနာတုန်းကလည်း အဲသလို southpaw လို့ပဲ ရေးတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဗယ်သန်တွေ ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင် လိုင်းပိုကျလွယ်တဲ့အကြောင်း ရေးထားတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တတိယစောက်ပေါက ဂေါ်လီပဲ၊ ပဉ္စမစောက်ပေါက စော်ကြည်ဘဲ။
Anonymous Tue Aug 24, 11:41:00 AM GMT+8
how about firstစောက်ပေါ??
TZA Wed Aug 25, 07:59:00 AM GMT+8
ညီမလေး Thu Aug 26, 05:15:00 PM GMT+8
မမချစ်ရယ် ... ခမျာများ သနားစရားP